Soo bandhig qisadaada - Soo Bandhigida Xaqiiqada
Haddii aad jecesahay in aad nala wadaagto qisadaada u soo dir ciwaanka soo soda.
Ama buuxi foomkaan.
Waxaad noo soo diri kartaa qoraal, cod ama video. Faylasha aad noo soo dirtaan waa in ay ku salaysanyihiin shuruucdeena si loo isticmaalo.
Sawiradaan waxaa qaaday Abdullahi isaga oo tahriib ku maraya saxaraha Libya bishii Maarso 2015. Waxa uu saxaraha Libya ku tilmaamay safarkii ugu adkaa ee noloshiisa. Maanta Abdullahi waxa uu ku noolyahay Sweden.
"Waxaa naga dhintay sadex qof, ka dibna waxaan gacanta u galnay muqalasiinta, waa adagtahay in laga hadlo waxyaabihii ay ku sameeyeen dumarka," ayay tiri. "Waxay ahayd nolol adag oo aanan soo koobi karin."
"Wax kasta waan arkay, ma ahan waxyaabo aad dhowr eray ku qeexi karto. Waxaa jiray dumar waayeel ah oo la jirdilay." ayay ku dartay.
"Waxaan joogay hal bil oo waxaa naloo sheegay in aysan jirin doomo baxaya. Cimiladu aad ayay u kuleyn biyana ma aanan haysan. Dad badan ayaa arkaysaa oo maqribkii nool subaxdiina dhintay" ayay tiri.
"Waxaan arkay kuwo lagu aasay kabaha, xitaa waxaan xasuustaa mar uu qof dhintay oo dadka kale ay ka qaateen timirtiisa iyadoo meydka uu daadsanyahay. Waa igu adagtahay in aan xasuusto xaaladaas."
"Xaalada Yurub waa sii xumaatay, ma hubo sida mustaqbalka uu noqonayo," ayay tiri. "Wali waxaan dareemayaa sidii in aan doon saaranahay, oo aanan hubin in aan horumar gaarayo iyo in kale? Waa xaalada aan ku suganahay ee ah in aanan ogeyn mustaqbalkayga."